Huwandu hweVanhu Vabatwa neCoronavirus Munyika Huchiri paVanhu Makumi Maviri neVasere
Kubvumbi 24, 2020
Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwasvika pamakumi maviri nevasere, vana vakafa, vaviri vachinzi vakapona.
Hurumende inoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika huchiri hwakamira pamakumi maviri nesere, vana vakafa, uye vaviri vakapona kubva kuchirwere ichi.
Izvi zvinogadziridza mashoko akambenge aburitswa nebazi rezvehutano neChina, ayo aiti huwandu uhwu hwakanga hwakwira kuenda pavanhu makumi maviri nevapfumbamwe zvichitevera kuwanikwa kwemumwe munhu kuBulawayo aine hutachiwana hunokonzera Covid-19.
Asi bazi iri razoburitsa mamwe mashoko anoti huwandu uhwu huchiri pavanhu makumi maviri nevasere, sezvo munhu akawanikwa aine hutachiwana neChitatu uyu akambenge ambongororwa nechakare.
Bazi rezvehutano iri rinoti nemusi weChitatu pakaitwa ongororo yepiri pavanhu zana nemumwe muBulawayo vakambenge vamboongororwa, izvo zvakaita kuti mumwe chete wavo abatwe zvakare aine hutachiwana hwe Coronavirus.
Bazi iri rinoti kune vanhu mazana mana nemakumi matanhatu vakaoongororwa nezuro kuona kana vaine hutachiwana hwe coronavirus, izvo zvasvitsa huwandu hwevanhu vaongororwa kusvika pari zvino pazviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mashanu.
Chikoro chepamusoro cheJohns Hopkins chiri muno muAmerica chinoti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nemazana manomwe ezviuru vabatwa nechirwere ichi pasi rose, uye vanhu vafa pasi rose vadarika zana nemakumi manomwe ezviuru.
Munyori mukuru wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu, reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Doctor Norman Matara, vanoti kuongororwa kwevanhu kechipiri kwakakodzera nekuti kunoita kuti munhu azive kuti anenge apona zvechokwadi here kana kuti kwete kubva kuCovid-19, kana kuti anenge asati abatwa nechirwere ichi.
Asi vanoti sesangano havasati vagutsikana nehuwandu hwevanhu vari kuongororwa kana vaine hutachiwana sezvo huchiri pasi zvakanyanya.
Doctor Matara vanoti hurumende yakanga yakavimbisa kuti ichaongorora vanhu vanosvika zviuru makumi matatu panopera mwedzi uno waKubvumbi, asi havaoni izvi zvichibudirira.
Hurukuro naDoctor Norman Matara